Wikipedia:Maqaal Cusub - Gpedia, Your Encyclopedia
Maqaalada Cusub Ee Gpedia
Bogga hore waxaa la soo dhigaa oo kaliya 9 maqaal kaasoo ah qayb ka mid ah 5,889 maqaal ee wikipedia guud ahaan ugu jirta. kaasoo ka dhigan 1 ! maqaal 654kiiba ee halkaan ku jirta. Maqaaladaan Waxeey ku guuleeysteen habka maqaalada cusub: si kooban loona qoray hab wanaagsan, waana mid sugan xigasho leh. waxaa laga yaabaa maqaalada csusb in ay noqon waayaan mid koobta maqaalada xulka ah, laakiin waxaa laga doonayaa in aan laga tagin wax kasto oo muhim ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gpedia:Maqaal_Cusub&oldid=200349"